(မိုးမခ ပြန်လည် ဆန်းသစ်ခြင်း)နို ဝင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၄
နိုင်ဝင်းဆွေ (၁၉၄၀ - ၁၉၉၅)
နိုင်ဝင်းဆွေ အမှတ်တရ စာအုပ် မျက်နှာဖုံး
ရေးဆွဲသူ - ပန်းချီ မင်းကျော်ခိုင်
ရေထဲမှာ ဆွဲ မြှုပ် ထားတဲ့ အခါ
ခဏတာ လေးမှ ပြန် ဖော် မပေး။
ကျနော့် ခေါင်းကို တိုက်သွား ရိုက်သွား
ကျနော့် မှာ မူးချာလည်ရင်း
ကိုယ့် ကိုယ်ခန္ဓာ ထဲမှာပဲ
လေကို ရှုသွင်း ရှိုက်ထုတ်။
ကြိုးစင် အတက်၊ မျက်နှာ တကွက်
တူရိုက်တဲ့ အခါ၊ ထုရဲ ရိုက်နှက်
ရဲရဲ ရိုက်ပုတ်၊ မတွန့်ဆုတ်နဲ့
အသက်နဲ့ သွေး၊ ပေးလှူ စတေးထား
ပြည်သူ့ တော်လှန်ရေး သမားလေ
တရက် နှစ်ရက် သုံးလေးရက်
တလ နှစ်လ သုံးလေးလ
ဖုံးလွှမ်းရေများ၊ ကျသွား ထွက်ပြေး
ရွက်သစ်စိမ်းတွေ ဖားလျား ဖြန့်ဝေ။
အနည်းအပါးတော့ ယိုင်နဲ့ သွားခဲ့၊
အနည်းအပါးတော့ ကျိုးပျက် ပဲ့ရွဲ့သွား။
ရေက တိုက်စားသွားခဲ့၊ သွားပါစေလေ”
ဒါပေမဲ့ ပြုံးနေတဲ့ မျက်နှာကို
မိုးထက် ဝဠာ သို့ မော့လို့။
တရွက် မကျန် ကြွေကျ
ရိုးတံ ပြိုင်းရိုင်း သစ်ကိုင်းညွတ်ကိုင်း
မြစ်ကမ်းယံ မိုးမခ တန်း ဟာ
အပွင့် ဖွေးဖွေး ဖွေးဖွေး လှုပ်လှုပ်။
စိမ်းမြ နဒီထက်က လေညင်းကို
သီချင်းကလေး တဖွဲ့ နှစ်ဖွဲ့
ကျနော် နှုတ်ခွန်းတော် ဆက်လိုက်ရဲ့။
Moe Ma Ka Plant
By Naing Win Swe. Edited by Melissa Tuckey. Contributors include Kyi May Kaung, February 14, 2012.
three months — oh.
Naing Win Swe (1940-1995) wasaprominent Burmese writer and poet. Translator Kyi May Kaung isaForeign Policy In Focus contributor, poet, and artist. Melissa Tuckey is the poetry editor for FPIF. The poem is copyright Naing Win Swe; the translation is copyright Kyi May Kaung.
မြန်မာ မူရင်း ကဗျာကို မောင်လွမ်းဏီ (ABSDF)၊ မင်းမင်းဦး (DPNS)၊ ဒေါင်းနီ တို့ စီစဉ်၍ နိုင်ဝင်းဆွေ အမှတ်တရ စာအုပ် ထုတ်ဝေရေးအဖွဲ့ (လွတ်မြောက်နယ်မြေ) က ဧရာဝတီ ညီနောင် စာပေ၊ ဘန်ကောက်၊ ထိုင်းနိုင်ငံ မှတဆင့် ဖြန့်ချိ ထုတ်ခဲ့သည့် နိုင်ဝင်းဆွေ အမှတ်တရ ကဗျာများ စုစည်းမှု စာအုပ် ရေဆန်လမ်းသို့ အပြန် (ပ ကြိမ်၊ ၁၉၉၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ) စာအုပ် ကနေ ကူးယူ တင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆရာမ (ဒေါ်) ကြည်မေကောင်း ဘာသာပြန်ကို http://fpif.org/moe_ma_kha_plant/ အင်တာနက် စာမျက်နှာ ကနေ ယူပါသည်။
မူပိုင်ခွင့် ချိုးဖောက်လိုစိတ် ရိုးသားစွာ မရှိပါ။ မိုးမခ က စီးပွား ဖြစ် အလို့ငှာ မဟုတ်ဘဲ ဆရာ နိုင်ဝင်းဆွေ အမှတ်တရ နှင့် မျက်မှောက် နိုင်ငံရေး အခြေအနေ တွင် စစ်အာဏာရှင် စနစ် ဆန့်ကျင်ရေး၊ ပေါင်းမစားရေး အတွက် တပ်လှန့် တော်လှန်ရေး အသိ၊ တော်လှန်ရေး သတိပေးလိုခြင်း အကြောင်းများကြောင့် ပြန်လည် တက်ဆက်လိုခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ ဆရာ နိုင်ဝင်းဆွေ ၏ အနုပညာ စာများကို မူပိုင်ခွင့် ဆက်ခံသူများ၊ ဘာသာပြန် ဆရာမ (ဒေါ်) ကြည်မေကောင်း၊ မျက်နှာဖုံး ပန်းချီ ကို လိုလိုချင်ချင် သုံးခွင့်ပေးခဲ့သည် ပန်းချီ ဆရာ မင်းကျော်ခိုင် (နယူးယောက်) နှင့် သက်ဆိုင်ရာ စီစဉ်ခဲ့သူများ ကို ကျေးဇူး တင်ရှိပါသည်။
Naing Win Swe Poems